Hello Nepal News » नेइमारको चाहना स्पेन नै फर्किने : के गर्दैछ बार्सिलोना ?
नेइमारको चाहना स्पेन नै फर्किने : के गर्दैछ बार्सिलोना ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले गत समर सिजनमै आफ्ना पूर्वखेलाडी ब्राजिलियन नेइमारलाई पुनः अनुबन्ध गर्न प्रयास गरेको थियो । तर, फ्रेन्च क्लब पिएसजीले नेइमारका लागि राखेको महँगो मूल्य बार्सिलोनाका लागि तगारो बनिदियो ।
पिएसजीले सन् २०१७ मा २५ वर्षका नेइमारलाई विश्वकीर्तिमानी २२२ मिलियन युरोमा भित्र्याएको थियो । तर, पेरिसमा लगातार असफलता र विविध कारणले नेइमारले पिएसजी छाडेर बार्सिलोना फर्किन चाहेका थिए । तर, बार्सिलोना र पिएसजीबीच समझदारी बन्न नसक्दा नेइमार थप एक सिजन पेरिसमै रहने पक्का भयो ।
हालै बार्सिलोनाका निर्देशक इरिक अबिडालले नेइमारको क्याम्प नोउ फिर्ती र समस्याबारे धारणा राखेका छन् । ‘मुन्डो डेपोर्टिभो’को ताजा संस्करणमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा अबिडालले नेइमार बार्सिलोनाका लागि सधैं विकल्प हुने बताएका छन् ।
‘नेइमार सबैका लागि सधैं विकल्प हुन् । हाम्रा लागि पनि ….. । उनी हाम्रा नम्बर वान विकल्प हुन् भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर, उनी आगामी दिनमा हाम्रा विकल्प हुन सक्छन्, यसमा ढाँट्नु आवश्यक छैन,’ निर्देशकले भने ।
निर्देशक अबिडालले आफूहरूले क्लबभित्र नेइमारबारे औपचारिक लाइन तय गर्न बाँकी नै रहेको बताए । उनले नेइमार फर्काउन आर्थिक समस्या कारण रहेको पनि खुलाए । ‘खेलका तहबाट हामी यस विषयमा निर्णय लिन सक्छौं । तर, त्यहाँ केही आर्थिक समस्या छन् । केही समाधान हुन सक्छन्, केही नहुन सक्छन्,’ उनले भने ।
निर्देशक अबिडालले नेइमारको विषयमा भविष्यले बताउने पनि बताए । ‘हामीले हिजोका दिनमा पनि उनलाई चाहेका थियौं । नेइमार अझै पनि हाम्रो राडरमा छन् । तर, यसबारे भविष्यले बताउनेछ,’ अबिडालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं । र, जारी सिजन सकिन अझै थुप्रै समय बाँकी छ । अन्तिमसम्म केही हुनसक्छ ।’
अबिडालले नेइमारले पिएसजी छाड्न चाहेको कुरा आफूहरूलाई जानकारी भएको पनि बताए । नेइमार त्र्यिाउन आफूहरूले अब एकपटक आगामी समर सिजनमा प्रयास गर्ने यदि सम्भव नभए फेरि त्यो समय नआउने अबिडालले बताए ।
‘उनी पेरिसमा खुसी छैनन् । र, छाड्न चाहन्छन् भन्ने हामीलाई जानकारी छ । तर, आजका दिनसम्म उनी पिएसजीका खेलाडी हुन्,’ अबिडालले भने, ‘मलाई लाग्छ, नेइमारको विषयमा निर्णय गर्न हामीलाई अब मात्रै एकपटक सोच्ने समय छ ।’
प्रकाशित मिति २ मंसिर २०७६, सोमबार ११:३२